Amụma Nzuzo - ASFO Store
Farmácia Sousa Torres na-eme nkwa maka nzuzo na nchedo nke ozi nke onye ọ bụla, nke a bụ naanị ndị ụlọ ahịa ọgwụ maka ịtụzi nhazi na njirimara ndị ahịa, na-enye ha ọrụ ọrụ ahaziri iche.
Nchebe onye ahịa na nzuzo bụ ọnụọgụ abụọ anyị, ozugbo ahụike. Dịka otu a, anyị na-agbasi mbọ ike idobe ihe niile dị na nchekwa nke ọma, na-eji ezi uche kachasị mma mgbe niile.
1. Usalọ ahịa ọgwụ Sousa Torres rịọrọ ndị ahịa ya n'oge ịdenye aha maka akaụntụ ọhụrụ, n'ụzọ doro anya, ihe ndị a:
- Aha nna;
- Number Identification Number;
- Nọmba ekwentị;
- Koodu Ziga;
- Mpaghara Obibi;
- Ụbọchị ọmụmụ;
2. Ihe ndị a niile dị mkpa maka ịdebanye aha na weebụsaịtị, ịnweta ọrụ ịzụta yana atụmatụ ndị ọzọ. N'otu ụzọ ahụ, ha na-enyekwa aka na njirimara doro anya nke onye edebanyere aha ya, yana n'ịgba ọsọ iji zipụ usoro na usoro ịkwụ ụgwọ.
3. Ozi niile gbasara onwe gị ma ọ bụ na-ezighi ezi site na ebe nrụọrụ weebụ a bụ nke Sousa Torres na-ere ọgwụ na-ejighi ya ma ọ bụ na-ekpughere ya ndị ọzọ.
4. Usalọ ahịa Sousa Torres agaghị eji ozi kọntaktị ọ bụla maka ịme ahịa, belụsọ mgbe onye ahịa họọrọ izizi akwụkwọ ozi na akpaghị aka na / ma ọ bụ ozi gbasara mmelite ngwaahịa n'oge usoro ịdenye aha, mgbe ọdabara.
5. Onye ahịa a na-elele oge niile, gbanwee ma ọ bụ wepụ ihe mmadụ kwuru banyere ya na faịlụ Sousa Torres Phamacy, site na ịbanye na interface "Ihe Ozi M".
Iji weebụsaịtị www.asfo.store gụnyere ịnakwere nkwekọrịta nzuzo a. Ndi otu webusaiti a nwere ikike igbanwe nkwekorita a n’amaghi ama. Yabụ, anyị na-akwado ka ị na-ezo aka na iwu nzuzo anyị oge niile, iji chekwaa onwe gị mgbe niile.
Maka ajụjụ ndị merenụ na Nzuzo nzuzo anyị, biko kpọtụrụ anyị.